छ बुँदे टोकियो घोषणापत्र, एक दर्जन पुस्तक विमोचित: अनेसास च्याप्टर सम्मेलन सम्पन्न « Himal Post | Online News Revolution
छ बुँदे टोकियो घोषणापत्र, एक दर्जन पुस्तक विमोचित: अनेसास च्याप्टर सम्मेलन सम्पन्न
प्रकाशित मिति : २०७६, ५ माघ १७:३६
टोकियो । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) को तेस्रो च्याप्टर सम्मेलनले संसारभरि छरिएका साहित्यकारहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संस्था स्थापना भएको दुई दशक बित्न लाग्दा सबैलाई समेट्दै नेपाली साहित्यलाई विभिन्न भाषामा अनुवाद गर्ने कार्यलाई पनि द्रूतगतिले अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनले पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन सिटौलाको नेतृत्त्वमा छ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आन्तरिक कमजोरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
केन्द्रीय कार्य समितिको आयोजना र जापान च्याप्टरको संयोजन र व्यवस्थापनमा भएको उक्त सम्मेलनको संयोजक जापान च्याप्टरका पूर्व अध्यक्ष दीप पाठक थिए । पाठकको नेतृत्वमा रहेको जापान च्याप्टर ( २०१७-२०१९ ) लाई संसारभरिका च्याप्टरहरुमध्ये उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेबापत विशिष्ट च्याप्टर पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
जापान च्याप्टरले प्राप्त गरेको उक्त पुरस्कार प्रमुख अतिथि तथा जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणाले प्रदान गरेकी थिइन् । कार्यक्रमलाई गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष एवं व्यवशायी भवन भट्टले सम्बोधन गर्दै प्रवासमा बढ्दै गएको साहित्य चेतलाई अनेसासले संगठित गरेकोमा हर्ष प्रकट गरे ।
कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ आइसिसीका कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले जापानमा रहेका नेपालीहरुको साहित्यप्रतिको लगावले आफू प्रभावित भएको बताए । प्रमुख अतिथिको आशनबाट बोल्दै राजदूत प्रतिभा राणाले बिदेशी भूमिमा नेपाली भाषा र साहित्यको उन्नयन र विकासमा अनेसासले गरेको योगदानको खुलेर प्रशंसा गर्दै यसकार्यमा दूतावास परिवार सहकार्य गर्न तयार रहेको कुरा बताइन ।
यसैगरी संस्थापक अध्यक्ष होमनाथ सुबेदी र बोर्ड अफ ट्रस्टी अध्यक्ष गीता खत्रीले पठाएको शुभकामना मन्तव्य महासचिव गणेश घिमिरेले वाचन गरेका थिए । दीप पाठकको स्वागत मन्तव्य रहेको सो उद्घाटन शत्रमा अनेसास जापानका पूर्व अध्यक्षहरु डा. कुमार बस्नेत, बेलु काजी थापा र बिष्णुप्रसाद घिमिरे, दिनेशराज ज्ञवली, गैरआवासीय नेपाली संघ जापान अध्यक्ष देवीलाल भण्डारी, आइसिसी एशिया युवा संयोजक दीपक कँडेलले पनि बोलेका थिए ।
दुई दिन चलेको उक्त कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा साहित्यकार महेश पौड्यालको कार्यपत्र र ५० भन्दा बढी कविहरुको कविता वाचन थियो । पौड्यालले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रलाई नेपाली भाषामा स्नातकोत्तर गरेका जापानी नागरिक हारुहितो नोजु र पत्रकार भूषण घिमिरेले टिप्पणी गरेका थिए । कार्यपत्र सेसनको सञ्चालन केन्द्रीय उपाध्यक्ष निशा अर्यालले गरेकी थिइन्।
कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष तथा बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्मा, पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष डा. कुमार बस्नेत र मोहन सिटौला तथा वर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष राधेश्याम लेकाली सहितको कार्यसमिति र च्याप्टर अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि र आजीवन सदस्यहरुको उपस्थितिमा केन्द्र, ट्रस्टी र च्याप्टरबीचमा दरिलो समान्वय कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।
१७ च्याप्टरका बीचमा भएको उक्त छलफलले विधान र आन्तरिक विषयमा दफाबार छलफल गरेको थियो । सहभागीहरुबाट आएका सुझाव र गुनासोहरुलाई केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीमसेन सापकोटा केन्द्रीय सचिव लालगोपाल सुवेदी र आजीवन सदस्य रमेश दाहालले संश्लेषण गर्नु भएको थियो ।
छलफल कार्यक्रमको सभापतित्व केन्द्रीय कार्य समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश पौडेल ‘माइला‘ले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्य गरेबापत दोस्रो हुने कोरिया च्याप्टर तथा तेस्रो हुने कतार च्याप्टरलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । उत्कृष्ट च्याप्टर पुरस्कारको प्रायोजन पदम विश्वकर्मा र द्वितीय र तृतीय च्याप्टर पुरस्कारको प्रायोजन निशा अर्यालले गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रमको मूल उद्घाटन शत्रको सञ्चालन केन्द्रीय कार्य समितिका महासचिव महासचिव गणेश घिमिरे र जापान च्याप्टर महासचिव रविन शर्माले गरेका थिए । पहिलो दिनको दोस्रो सेसनमा ५० कविहरुले कविता वाचन गरेका थिए ।
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण बम मल्ल, प्रतिष्ठानका जापान शाखा अध्यक्ष सूर्य खड्का र समुद्रराज पौडेलले साङ्गीतिक माहोल सिर्जना गरेका थिए । काव्य गोष्ठीको सञ्चालन केन्द्रीय सचिव लालगोपाल सुवेदी र जापान च्याप्टर उपाध्यक्ष हेमन्त गिरीले गरेका थिए । जापानस्थित नेपाली दूतावासले कार्यक्रममा सहगाभी साहित्यकारहरूलाइ स्वागत गर्दै रात्रीभोजको अयोजना गरेको थियो ।
अन्तिम शत्रमा च्याप्टर अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुले आफ्नो आफ्नो च्याप्टरको २ वर्षे कार्य प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । यो शत्रको सञ्चालन केन्द्रीय उपाध्यक्ष शान्तिराम ढकाललेगरेका थिए। सम्मेलनमा अमेरिका, जापान, कोरिया, नेपाल, भारत, कतार, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकको सहभागिता थियो ।